थापा, राणा र लोहनीलाई के दिल्लीले मिलायो ?
थापा, राणा र लोहनीलाई के दिल्लीले मिलायो ? राप्रपा नेताकाे दावी-कांग्रेस र नेकपामा ‘काज’ गएका कार्यकर्ता अब फर्किन्छन्
जनतापाटी डेस्क बुधबार, फागुन २८, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएर आएपछि थुप्रै उपद्रो सुरु भएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, दिल्ली हिंसा । त्यसअघि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय लगायतमा भएको आक्रमण पनि मोदी सत्ताकै उपद्रो थियो ।
केही भारतीय विश्लेषकले ‘दिल्ली हिंसा’मा गुजरात दंगाकै झल्को आएकोसमेत भने । मोदी सत्ताका गतिविधिलाई हिन्दूअतिवाद भने धेरैले । दिल्ली हिंसामा त राष्ट्रसंघ नै बोल्यो । अब भने मोदी सत्ताले अघि बढाएको ‘हिन्दु अतिवाद’को प्रभाव नेपालमा पनि सुरु भएको संकेत आउन थालेका छन् ।
त्यसको ताजा (देखिनेगरी) उदाहरण ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा(संयुक्त)बीच एकीकरण’हो–भनिरहेका छन् केहीले । र, दक्षिणी छिमेकी सक्रिय भएको आधार समेत यसैलाई मान्नुपर्ने धारणा बन्न थालेका छन् ।
केही दिन पहिले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकको रडाकोले बाह्य चलखेलको संकेत दिएको थियो । नभए, बालुवाटारबाट घर फर्किसकेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले फेरि बालुवार डाक्नु पर्ने कारण नै थिएन ।
आफुलाई सहयोग गर्नुपर्ने सामान्य कुरा भन्न पनि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के सचिवालय बैठकमा भन्न सक्थेनन् ? तर, कोटेश्वरस्थित निवास पुगिसकेका नेता नेपाललाई तुरुन्तातुरुन्तै बालुवाटार डाकेर ‘सहयोग गर्न’ भने प्रधानमन्त्रीले ।
त्यही बेला माधव नेपालको मुखबाट फुत्त निस्केको थियो, ‘मलाई त कस्तो–कस्तो अफर आए , यहाँ भन्नु भएन । तर, तपाईं नआत्तिनुस् भनिरहेका छौँ त हामी ।’ त्यति मात्रै होइन, यही कुरा तपाईंले बैठकमा किन भन्न सक्नु भएन भन्दै नेपाल झोंकिए, पनि ।
नेता नेपालले अफर कताबाट आयो भन्ने कुरा खोलेनन् । तर, त्यो दक्षिणबाटै थियो भन्ने लख काट्नेहरुलाई बल पुगेको छ, पूर्वपञ्चबीचको एकताले । यसलाई दक्षिणको पहिलो सफलतासमेत भन्न थालिएको छ ।
उता, मुख्य विपक्षी पार्टीको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलक्षित चलखेलमा भने भारत परीक्षणकै भूमिकामा रहेको केही जानकारहरुको बुझाई छ ।
तर, असाध्यै कमजोर स्थितिमा रहेका पूर्वपञ्चहरुले प्रबद्र्धन गरिरहेका विषयवस्तुप्रति बढेको भारतीय मूलधारको आकर्षण भने अचम्मकै छ । यही मेलोमेसो पारेर मोदी सत्ता आफ्नो भूमिलाई गतिलो सन्देश दिन खोजिरहेको भनिँदै छ ।
के पशुपतिको दिल्ली दौडाहले काम गर्‍यो?
प्रजातान्त्रिक यी दुई शक्तिबीच पार्टी एकीकरणको टुंगो लागेको गएको माघ २९ मै हो । तर, कमल थापा पक्षधरहरु तयार हुँदासम्म फागुन १ भयो । त्यही अनुसार दुई दिन आन्तरिक छलफल गरेर पद, कमिटी संख्या, राजनीतिक दृष्टिकोणहरु टुंगो लगाएर ३ गते एकताको घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखे थापाले । पशुपतिले हुन्छ भने ।
तर, २ गते बिहानै ‘एकदमै जरुरी’ भन्दै पशुपति दिल्ली उडे । एक दुई दिनमै फर्किन्छु अनि कुरा गरौँला भनेका पशुपतिले १०–१२ दिन उतै हराए । यो अन्योलतामा कमल थापाहरु सातै प्रदेशमा पार्टी अभियान जारी राख्ने र एकतापछि फेरि अर्कै कार्यक्रम गर्ने मनस्थितिमा पुगे । पशुपति आउन ढिलाई गरे । प्रकाशचन्द्र लोहनीले जवाफ दिएनन् र थापाले प्रदेश कार्यक्रम जारी राखे ।
तर, पशुपति दिल्लीबाट फर्किनासाथ आन्तरिक छलफल तीब्र भयो । गतिरोधको अवस्था सर्लक्कै हट्यो । एकता हुने पक्का भयो । पशुपति दिल्लीबाट फर्किनासाथ गतिरोध अन्त्य भएको कुरा उनी पक्षधर राप्रपा (संयुक्त)का प्रवक्ता किरण गिरीले स्वीकारे । उनले दिल्लीकै इसारामा एकीकरण सम्भव भएको कुरा चाँहि भन्नु हुँदैन–भने । संयोगसम्म भन्न मिल्ला, उनले भने, ‘संसदीय निर्वाचनमा भोगेको सर्मनाक हार र कार्यकर्ताको दबाबले नै एकताको आधार तयार पारेको हो ।’
अनि पशुपतिशमशेर त्यत्रो दिन दिल्ली बस्नुको कारण ? जवाफमा उनले भने, ‘उहाँ दिल्ली बस्नुको कारण व्यवहारिक हो । दिल्लीमा उहाँको घर व्यवहारको कुरा पनि छ । धेरै खालको व्यवहार पो छ त उहाँको ।’
यही कुरा कमलथापा पक्षधर प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले पनि गरे । पशुपतिको दिल्ली बसाइले यो सबै वातावरण निर्माण गरेको भन्नु सरासर गलत, उनले भने, ‘जुनदिन पार्टी चुनावमा भ्यागुतो पछारिए झैँ पछारियो त्यो दिनदेखि नै पार्टी एकीकरणको कुरा अघि बढेको हो ।’ उनका अनुसार जुनदिन जन्ताले पत्याएनन् भन्ने थाहा भयो त्यही दिनदेखि बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको खोजी सुरु भएको हो ।
फागुन २४ अघि यो काम सुसुप्त रुपमा भइरहेको थियो, उनी भन्छन्, ‘लामो प्रयासले अहिले मूर्तरुप लियो । योसँगै नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको ढोका खुलेको छ । र, यथास्थितिमा भरपर्दो विकल्प तयार भयो ।’
यस्तो विकल्पका कुरा त डा. बाबुराम भट्टराईले पनि कयौँ पल्ट गरेका थिए, तर उहाँ अहिले अन्तै टाँसिन परो ? जवाफमा उनले भने, ‘उहाँ (डा. भट्टराई)को जग कम्युनिष्ट आन्दोलन थियो । त्यो छोडेपछि उहाँसँग जग नै रहेन । तर, हामी त परम्परागत रुपमै जग भएका शक्ति हौँ । खाली हामी आपसमा मिल्न नसकेका मात्रै हौँ नि !’ उनले आफुहरु आपसमा मिल्न नसकेकै कारण कार्यकर्ता विचलित भएको बताए । कार्यकर्ता अन्यत्र बाँडिएकोबारे उनी भन्छन्, ‘हाम्रा केही कार्यकर्ता कांग्रेस नेकपातिर काजमा गएका छन् । अब ति सबै फर्किन्छन् ।’
कार्यदिशा के ?
यी दुई पार्टीको एकता पछिको कार्यदिशा हिन्दू राष्ट्र र बलियो स्थानीय स्वायत्त शासन रहेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको पक्षमा भएका, संघीयताको विपक्ष तर बलियो स्थानीय स्वायत्त शासनका पक्षधर व्यक्ति र समूहसँग एकीकरण हुन्छ । र, यीनै पक्षधरहरुको ध्रुवीकरण हाम्रो अभियान हो ।’
विगतबाट आफुहरुले पाठ सिकेको बताउँदै उनले जनताले बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको चाहना राख्ने तर आफुहरु कमजोर हुने स्थितिबाट अब जुरुकै माथि उठ्ने जिकिर गरे ।